VAOVAO SY SARY PEMBROKE COCKER CORGI - ALIKA
Vaovao sy sary Pembroke Cocker Corgi
Pembroke Welsh Corgi / Alika Amerikanina Cocker Spaniel Miora
Bob (Ilay Alika) Cocker Spaniel / Corgi mifangaro amin'ny 11 taona— 'Teraka tany Shina (Chongqing), dia nahitana inoka rehetra nanomboka tamin'ny andro 1, saingy mazava ho azy fa takiana rehefa entina any Angletera. Mety ho bugger taloha be hatoka. Mitovy amin'ny raiko, fa namana be fitiavana sy mpiaro. Izaho manokana dia nipetraka sy niasa tany Sina nandritra ny taona maro ary tsy afaka nandao azy fotsiny tamin'ny fiverenako tany UK. Anisan'ny fianakaviana izy !! '
alika mpanjaka charles mifangaro
Ny Alika Pembroke Cocker Corgi dia tsy alika tsy madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Pembroke Welsh Corgi ary ny Spaniel Cocker amerikana . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ho 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Alikako ity. Izy dia fifangaroana eo amin'ny Cocker Spaniel sy Pembroke Welsh Corgi. Hitan'ny olona fa mahafinaritra be izy noho ny habeny, ny endriny ary ny toetrany. 16 taona izy eo amin'ny sary, nefa manana endrika mitovy amin'ny alikakely foana izy. Ny endriny dia Corgi amin'ny ankapobeny, nefa manana rambony sy sofina lava kokoa koa izy. Matanjaka be toy ny Corgi izy, na dia tsy dia kely loatra aza noho ny taonany, tia milalao, mihazakazaka haingana ary mankafy ny eny ivelany. Tiany ny misarika ny saina ary rehefa ao an-trano dia tia miala sasatra sy matory izy. Tena mahay, mifampiresaka ary tia orinasa. '
Cocker Spaniel / Pembroke Welsh Corgi mifangaro amin'ny 16 taona
Eddie dia mpangaro Cocker Spaniel / Pembrook Welch Corgi
Oreo the Pembroke Cocker Corgi toy ny alika kely amin'ny 4 volana— 'Oreo (nomena anarana noho ny afovoan-dohany fotsy sy ny endriny mainty ivelany izay toa mena miloko amin'ny hazavan'ny masoandro) dia herintaona. 'Oopsie' ny fahaterahany, nivaha ny alika mpifanila vodirindrina taminy. Ny rainy dia amerikana Cocker Spaniel purebred ary ny reniny dia Pembroke Welsh Corgi purebred (ny sasany amin'ireo mpiray tampo aminy dia mitazona ny loko mena avy amin'ny Corgi ary amin'ny toerana mena sy fotsy fa tsy mainty sy fotsy). Alika velona tokoa izy ary hilalao mandritra ny ora maro, na dia waaaay lasa aza ny fotoana fandriana. Mpinamana mahatoky toy izany izy tonga ho azy rehefa antsoina, tsy mila fampiofanana. Izy no tena mpihazakazaka, indrindra rehefa misy baolina tenisy tafiditra, indraindray ny alika haingam-pandeha indrindra. Saingy ny baolina ankafiziny indrindra dia ny baolina kitra, lasa adala izy ireo ho azy, indraindray midradradradra amin'ny toerana avo toa tsy hoheverinao ho hain'ny alika. Oreo no zavatra kely indrindra, manintona ny sain'ny olona rehetra sendra azy. Izy no vadiko ary ho very miaraka aminy aho, ny toetra tsara indrindra mifangaro (endrika, hatsaran'ny volony, fahasalamana sns) ary ny toetra azonao angatahina amin'ny alika. '
Oreo the Pembroke Cocker Corgi toy ny alika kely amin'ny 6 volana
Lisitry ny alika mifangaro Corgi Mix
Lisitry ny Pembroke Welsh Corgi Mix Dogs
mpiandry alemanina afangaro amin'ny voromahery
Jack Russell dachshund afangaro mahatratra
asehoy ahy ny sarin'ny yorkie teacup
Saint bernard 1 taona